I-Terrigal Getaway - I-Airbnb
Terrigal, New South Wales, i-Australia
U-Allan Ungumbungazi ovelele
Nethezeka futhi ujabulele ukubukwa nobumfihlo baleli khaya eligcwele ukukhanya.Ipulani evulekile yokuhlala/yokudlela eholela emphemeni oshiswe yilanga ojabulela umbono omuhle phezu kolwandle.
Leli fulethi lestudiyo liwuhambo olufushane lwemizuzu eyi-15 ukuya eNorth Avoca noma emabhishi aseTerrigal.
Amathawula olwandle anikezwa
Isikhala sisezingeni eliphezulu lendlu, sinekhishi elihlanganisa i-microwave, ipani likagesi, i-toaster, iketela kanye nefriji. Ikhofi netiye kuhlinzekwa ngezinketho zasekuseni ezifakiwe
Njengoba ngisanda kulungisa izinga eliphezulu lekhaya lami ngemibhede emisha nezihambeli zefenisha zinokufinyelela kwazo okuyimfihlo ngokubuka okumangalisayo kolwandle. Okwamanje kunombhede wendlovukazi ongu-1 kanye nombhede owodwa ongu-1x wenkosi
Ikhishi, igumbi lokugezela, igumbi lokuhlala, amagumbi okulala ama-2 kanye nesitezi esibheke enyakatho-mpumalanga esithwebula umbono nokukhanya kwelanga.
4.91 · 214 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-214
Kunezindawo zokudlela ezingaphezu kuka-50 e-terrigal kanti indawo yokudlela yase-Cowrie iwuhambo lwemizuzu emi-5 futhi inikeza ukudla kwasolwandle okumnandi kanye nemibono. Amashadi wokuntywila nokudoba atholakala eTerrigal.
Ngizohlonipha ubumfihlo bazo zonke izivakashi futhi uma kukhona okudingekayo ngivele ngingabi nalucingo.
Kukhona ukhiye ophephile ongaphandle komnyango wangaphambili wokufinyelela kalula okuphephile nokuvikelekile. Amathawula olwandle nawo wonke amalineni anikeziwe
Kukhona ukhiye ophephile ongaphandle komnyango wangaphambili wokufinye…
UAllan Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Terrigal namaphethelo